ဒီထက်ကောင်းတာမရှိ | CeleTrend
ကြာခဲ့ပါပြီ။ ၈၂- ၈၃ လောက်ကထင်တယ်။ တီဗွီဆိုတာပေါ်ကာစ၊ ကျနော်တို့လမ်းထဲမှာ တီဗီရှိတဲ့အိမ်က တအိမ်ထဲရယ်။ အဲဒီတော့သူတို့က ညဘက်ဆိုရင် လူတယောက် ပြား ၅၀ ယူပြီးပြစားတယ်ဗျ။ မြန်မာ့အသံကပြတာတွေကိုဘဲ ငါးမူးပေးပြီးကြည့်ရတာပေါ့။ ဒါတောင်လူတွေကကြိတ်ကြိတ်တိုး။ အဲဒီအိမ်အကြောင်းအရင်ပြောရမယ်။ အိမ်ရှင်က ကိုအောင်မြင့်တဲ့။ သူ့မိန်းမက မတင့်တင့်။ ကိုအောင်မြင့်က အသက် ၃၉-၄၀ လောက်ရှိပြီး အမယု့ကလည်း သူနဲ့ မတိမ်းမယိမ်းပါဘဲ။ ကျနော်တို့က ၂၀ ပတ်ချာလည် တွေပေါ့။ ကျောင်းပြီးကာစ အစိုးရအလုပ်ကလေးဝင်ကာစပေါ့။ ကိုအောင်မြင့်တို့ အမယု့တို့က ကျနော်တို့နဲ့ အသက်ကွာပေမဲ့ လူငယ်တွေနဲ့ လူငယ်ပေါင်း ပေါင်းတော့ ကျနော်တို့က အကို အမဘဲ ခေါ်ကြပါတယ်။ သူတို့အိမ်ကြီးက နှစ်ဆောင်ပြိုင်အိမ်ကြီး၊ အပေါ်ထပ်မှာ သူတို့မိသားစုနေကြတယ်။ အောက်ထပ် ခြေရင်းဘက် ခြမ်းမှာ ညဆိုတီဗီပြတယ်။ နေ့ဆိုရင်တော့ဧည့်ခန်းလုပ်ထားတာပေါ့။ ခေါင်းရင်းခန်းကျတော့ လေဆိပ်စီမံကိန်း မှာ လုပ်နေတဲ့ မိသားစု နှစ်စုကိုငှားထားတယ်။ သူတို့က အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းကို တမိသားစုတခန်းစီနဲ့ အိမ်ရှေ့ခန်းနဲ့ မီးဖိုခန်းကိုတော့ တူတူသုံးကြတာပေါ့။ ကိုအောင်မြင့်တို့လင်မယားမှာ ကလေးက ၄ ယောက်၊ အကြီးဆုံးက ၁၀ တန်းရောက်နေပြီ၊ ရီရီအောင်တဲ့၊ သူ့အောက်က နီနီအောင်က ၆ တန်း နောက် ၂ ယောက်ကတော့ ငယ်သေးတယ်၊ ၄ တန်းနဲ့ ၂ တန်း တွေ။ တခါ အောက်မှာငှားနေတဲ့ ထဲက မိသားတစုမှာက မွေးကင်းစ ၄ လ သားလေးတယောက် နဲ့ နောက်တဘက် မှာက ၉ တန်းကျောင်းသူတယောက်ပါတယ်။
အဲဒီကောင်မလေးနာမည်က မီးမီးလို့ခေါ်ကြတာဘဲ။ သူတို့က သူတို့အခန်းထဲမှာလင်မယားနဲ့ သမီးပျို အတူအိပ်လို့ မသင့်တော်လို့ မီးမီးကို အပေါ်ထပ်မှာ ရီရီအောင်နဲ့ အတူ အိပ်ခိုင်းတယ်ဗျ။ ဇာတ်လမ်းကျောရိုးကတော့ဒီလောက်ပါဘဲ။ ကျနော်က ဒီအိမ်မှာ ရီရီအောင်ကိုကျူရှင်ပြရတယ်။ ဖရီးကစ်ပါ။ အဲဒီအတွက် ကျနော့ကို တီဗီဖရီးပြတာပေါ့။ ကျနော်ကျူရှင်ပြချိန်က ညနေပိုင်း၆ နာရီကနေ ရ နာရီအထိဘဲ။ အင်္ဂလိပ်စာ တဘာသာဘဲပြရတာ။ ကျူရှင်ပြရင်းနဲ့ ရီရီအောင်ကို မထိတထိကျူနေတာ အဆင်ပြေတယ်ဗျ။ သူ့အမေကလည်း မသိချင်ရောင် ဆောင်ဆောင်နေတော့ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလို ရီရီအောင်နဲ့ ကလူဧ။်သို့ မြူဧ။်သို့ လုပ်နေတာကို ကြားထဲကနေ မီးမီးက ၀င်ဝင်လုံးတယ်ဗျ။ မြီးကောင်ပေါက်ဆိုတော့ သူကလည်း စိတ်ကစားတာနေမှာပေါ့ဗျာ။ ကျနော်ကလည်း သူတော်ကောင်းလေးဆိုတော့ သိပ်ထိမ်းမနေ ပါဘူး။ ကြုံရင်ကြုံသလို မသိမသာတော့ လက်သရမ်းတာပေါ့။ ကျနော့ရဲ့ သရမ်းတဲ့လက်ကို ဒီကောင်မလေးနှစ်ယောက်လုံးက သာယာနေကြတယ်ဗျ။ “အကိုကျော်နော်၊ အကိုကျော်နော်” သာ အော်အော် နေပေမဲ့ မနောကတော့တခွေ့ခွေ့ပါ။ တကဲ့ မိန်း ဇာတ်လမ်းစတာက သူတို့လူကြီးတွေကြောင့်ပါ။ လူကြီး ၃ စုံတွဲက ညဘက်ဆိုရင် ကလေးတွေကို အိမ်ပေါ်ထပ်တင်ပြီး အောက်ထပ် ခေါင်းရင်းခန်းကို တီဗီရွှေ့ ပြီး လူကြီးကားတွေကြည့်ကြတယ်ဗျ။ ကျနော်လည်း အစကတော့မသိပါဘူး၊ နောက်မှ ရီရီအောင်နဲ့ မီးမီးတို့ပြောတော့မှ သိရတာ။ တဟီးဟီး တခွိခွိ နဲ့ ကျနော့ကို မီးမီးကတိုးတိုးလေး အရင်လာပြောတာ။ ရီရီအောင့်ကို “ဟဲ့ ဟုတ်လို့လား” ဆိုတော့ သူက ရီဖြဲဖြဲနဲ့ “အင်း” တဲ့။ ကျနော်လည်း “ဒါနဲ့နင်တို့ဘယ်လိုသိလည်း” ဆိုတော့ မီးမီးက “သမီးတို့ အပေါ်ကနေ ချောင်းကြည့်နေတာ” တဲ့။ “နင်တို့က ဒါကျတော့ နင်တို့အကိုကိုလျှိုထားတာလား ငါ့လည်းပေးပြလေဟာ” ဆိုတော့ ရီရီအောင်က “အာ၊ အကိုကျော်ကလည်း သူတို့က အကိုကျော်တို့ ပြန်သွားပြီး သမီးတို့ အိပ်တော့မှ ကြည့်ကြတာ” “ဒါများဟာလွယ်ပါတယ်၊ ငါ အသာလေးအိမ်ပြန်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး မပြန်ဘဲ ပုန်းနေလိုက်မှာပေါ”့ “ဒါဆိုရင် ဒီတပါတ်ကျရင်လုပ်လေ၊ သူတို့က စနေတနင်္ဂနွေမှ ကြည့်ကြတာ။” “ဘာလုပ်ရမှာလည်း” “အကိုကျော်နော်၊ ကြည့်လေ လို့ပြောတာ၊ ဒါဘဲနော် ရုတ်ရုတ် ရုတ်ရုတ်လုပ်ရင်မပြတော့ဘူး။” “အေးပါ၊ အေးပါဟာ။
မလုပ်ပါဘူး ကြည့်ဘဲကြည့်မှာပါ။ ပြပါနော်။” အဲဒီလိုနဲ့ စနေနေ့ညကိုရောက်လာပါတယ်။ တီဗွီ အစီအစဉ် မပြီးခင်လေးမှာ ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း ကျနော် မယောင်မလယ်နဲ့ အိမ်ပေါ်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ပေါ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး၊ ကျနော်လည်း အသာလေး ရီရီအောင်နဲ့ မီးမီးတို့အိပ်တဲ့အခန်းထဲဝင်ပြီး သူတို့ကုတင်ပေါ်မှာလှဲအိပ်နေလိုက်ပါတယ်။ ကျနော့အိမ်ကိုတော့ မြို့ထဲက သူငယ်ချင်းတယောက်အိမ်မှာ ညအိပ်မယ်လို့ ကြိုပြောထားခဲ့ပါတယ်။ ခဏကြာတော့ မီးမီးက အခန်းထဲဝင်လာပြီး တိုးတိုးလေး “အကိုကျော် ခြင်ထောင်ချထားလေ။ တော်ကြာ မတော်တဆအန်တီတင့်တက်လာဦးမယ်” ဆိုပြီး သူကိုတိုင်ဘဲ ခြင်ထောင်ချပေးသွားပါတယ်။ အော် ကျနော်ပြောဘို့မေ့သွားတာလေးရှိပါသေးတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်မှာ ရီရီအောင်က အသက်ပိုကြီးပေမဲ့ ကိုယ်လုံးက သေးသေးကွေးကွေးပါ။ နို့လေး သေးသေးလုံးလုံးလေးနဲ့ ဖင်လေးကလဲ လုံးလုံးသေးသေးလေး ပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ မီးမီးကတော့ အသက်သာ တနှစ်ပိုငယ်တယ် လူကောင်ကတော့တော်တော်ထွားပါတယ်။ အရပ်ကတော့ပုတယ် နို့ကြီးက အယ်နေပြီး ဖင်လုံးကြီးကလဲ အကြီးကြီးပါ။ ကျနော် အပေါ်ရောက်လို့မကြာခင်မှာဘဲ အောက်က တီဗွီရှိုးပြီးသွားပါတယ်။ တီဗွီပြပြီးသွားတော့ ထုံးစံအတိုင်း ရီရီအောင်က အခန်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတုံး မီးမီးက အပေါ်တက်လာပြီး အခန်းထဲဝင်လာပါတယ်။ အငယ်နှစ်ယောက်ကလည်း ကျနော်တို့ရဲ့ဘေးခန်းမှာ ၀င်အိပ်နေကြပါပြီ။ အငယ်နှစ်ယောက်က အကိုအောင်မြင့် တို့လင်မယားနဲ့ တခန်းထဲအတူတူအိပ်တာပါ။ မီးမီးက ခြင်ထောင်ထဲဝင်လာပြီး ကျနော့ဘေးမှာဝင်လှဲလိုက်ပါ တယ်။ ကုတင်က နှစ်ယောက်အိပ်လည်းမကျ တယောက်အိပ်လည်းမကတဲ့ စကောစက တယောက်ခွဲကုတင်ပါ။ အိပ်မယ်ဆိုရင်ခွာအိပ်လို့ရပေမဲ့ မီးမီးက ကျနော်နဲ့ ကပ်ပြီးလှဲချလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ “အကိုကျော်နော်၊ အိပ်ပျော်မသွားနဲ့အုံး၊ သူတို့က တော်တော်ညနက်မှ ကြည့်ကြတာ” လို့တိုးတိုးလေး နားနားကပ်ပြောပါတယ်။ ကျနော်လည်း “ရပါတယ်ဟာ နင် အနားမှာရှိတာဘဲ အိပ်မပျော်ပါဘူး” ဆိုပြီး သူပုခုံးကို သာသာလေးဖက်လိုက်ပါတယ်။
မီးမီးက ကျနော်ဖက်တာကို ဘာမှ မပြောဘဲ ကျနော့်ကိုကျောခိုင်းပြီး တဘက်လှည့်အိပ်နေလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်က သူ့ပုခုံးလေးကိုဖွဖွလေးပွတ်လိုက် လည်ပင်းသားလေးကို ပွတ်ပေးလိုက် လုပ်နေ တော့ မီးမီးက ငြိမ်နေပါတယ်။ အရင်ကလဲ ကျောပွတ် ဂေါင်းပွတ်လုပ်လက်စရှိတော့ အိုကေနေပါတယ်။ ခါတိုင်းဆို သူ့ထက် ရီရီအောင်ကို ပိုကလိတော့ သူက မနာလိုဖြစ်နေတာ ခု သူ့ကို ကလိတော့ အပြတ်သဘောကျနေပါတယ်။ အဆင်ပြေနေပြီဆိုတော့လည်း ကျနော်ကရှေ့ ဆက်တိုးပြီး သူ့ ရင်ညွန့်လေးကိုပွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မီးမီးက ငြိမ်နေပြီး အသက်ရှူသံ ပြင်းလာပါတယ်။ ကျနော်က လေသံလေးနဲ့ “ကောင်းလား” ဆိုတော့ သူက လည်း တိုးတိုးလေး “အင်း… ” လို့ဆိုပါတယ်။ ကျနော်လည်း သူ့ကိုသိုင်းဖက်လိုက်ပြီး သူ့ဗိုက်သားလေးကိုပွတ်ပေးနေပါတယ်။ သူ့ဘော်လီအင်္ကျီနဲ့ စပန့်ဘောင်းဘီ ကြားမှာလွတ်နေတဲ့ ဗိုက်သားလေးကိုဖြေးဖြေးလေးပွတ်ပေးနေတော့ သူက ငြိမ်ခံနေပါတယ်။ ဗိုက်သားလေးကိုပွတ်ပေးနေရာကနေ တဖြေးဖြေးအပေါ်တက်ပြီး ဘော်လီအင်္ကျီပေါ်ကနေ တဖြေးဖြေး သူ့ ရင်သားဘက်ကို တက်လာပြီး သူ့နို့ကို အပေါ်ကနေ ဖွဖွလေးပွတ်လေိုက် နဲနဲညှစ်လိုက်လုပ်ပေး လိုက်တော့ သူက ကျနော့လက်ကိုအုပ်ကိုင်ပြီးညှစ်ထားပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း ရှေ့ ဆက်တိုးပြီး သူ့ရင်ညွန့်လေးကို ပွတ်ပေးနေလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျောဘက်မှာရှိတဲ့ ဘော်လီဂျိတ်ကို အသာလေး တဂျိတ်ချင်း စဖြုတ် ပါတယ်။ ဘော်လီကကြပ်နေလို့ ဂျိတ်ဖြုတ်ရခက်နေတော့ သူက ကျောကုန်းကိုကျုံ့ပေးပါတယ်။ အဲဒီတော့လဲ ဘော်လီဂျိတ်တွေ လွယ်လွယ်ကူကူဘဲပြုတ်သွားပါတယ်။ ဂျိတ်တွေပြုတ်သွားတော့ ကျနော့်လက်ကိုဘော်လီ အောက်လျှိုသွင်းပြီး သူ့ဗိုက်ကိုစ ပွတ်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့တဆင့်တက်ပြီး နို့နှစ်လုံးကို တလုံးချင်းမဖိတဖိလေး ပွတ်ဆွဲလိုက် သာသာလေးညှစ်လိုက်လုပ်ပေးပါတယ်။ သူ့နို့အသားတွေက ကြက်သီးတွေထနေလို့ ကြမ်း တမ်းတမ်းလေးဖြစ်နေပါတယ်။ ဆက်ပြီး သူ့နို့သီးခေါင်းလေးကို ဖိပွတ်လိုက်ဖွဖွလေးညှစ်လိုက်လုပ်ပေးတော့ ဖီလင်တွေတအားတက်နေပြီး သူ့အသက်ရှူသံတွေလည်းပိုပြင်း လာပါတယ်။ ကျနော်လည်း မရပ်ဘဲ ဆက်ပွတ်နေရာက ကျနော့ လက်ကို စားကျက်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ ပွတ်ရင်းသပ်ရင်းနဲ့ အောက်ဘက်ကို စုံဆင်းလိုက်ပါတယ်။ ချက်နားမှာ ခနလောက်တ၀ဲလယ်လယ်လုပ်ပြီးတော့ လက်ကို သူ့ဘောင်းဘီထဲ ထိုးသွင်း လိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ သူ့ဆီးခုံလေးကို ပွတ်ပေးနေလိုက်ပါတယ်။ သူ့စောက်မွှေးပါးပါးလေးကို လက်နဲ့ဖွဖွပေးပြီး စောက်စိလေးကိုပါမထိတထိကလိပေးလိုက်ပါတယ်။ မီးမီးကတော့ နိဗ္ဗါန်ေ၇ာက်နေ တော့ငြိမ်ခံနေပါတယ်။ ကျနော့လက်က သူ့ဆီးခုံကနေ သူ့အဖုတ်ပေါ်စလဲပွတ်ရော သူ့ဖင်ကြီးကို ကျနော့ဘက် ကော့ထိုး လာပါတယ်။အဲဒီတော့ ကျနော့ရဲ့ မါတောင်နေတဲ့လီးကြီးက သူ့ဖင်အကွဲ ကြောင်းကြားဝင်ထောက်မိနေတော့ တာပေါ့။ ကျနော့လက်ကလည်း သူ့အဖုတ်အကွဲကြောင်းကြားကို လက်ခလယ်နဲ့ ပွတ်ဆွဲနေပါပြီ။ ကျနော့လက်ခလယ်က သူ့အဖုတ်အထဲတောင်မရောက်သေးပါဘူး သူ့ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းကြားမှာစောက်ရည်တွေ တော်တော်ရွှဲနေပါပြီ။ သူတော်တော်ကိုထ နေတာ သိသာ နေပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာတော့ ဘာဆက်လုပ်လုပ်ရနေပါပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာဘဲ ရီရီအောင်က အခန်းထဲကိုဝင်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ တန်းပေါ်က စပန့်သားဘောင်းဘီရှည် တထည်ကိုယူလိုက်ပြီး ကုန်းလဲလိုက်ပါတယ်။ ပြီးထမီကိုချွတ်လိုက်ပြီး ထမီကြိုးတန်းပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခြင်ထောင်ကိုလှပ်ပြီး အထဲဝင်လာပါတယ်။ သူအခန်းထဲဝင်လာကတည်းက ကျနော့်လုပ်ငန်းကို ရပ်ထားပြီး မီးမီးနဲ့ ကျနော်က ခပ်ခွာခွာလေးနေနေတော့ ရီရီအောင်က ဘာမှ မရိပ်မိဘဲ ကျနော့တခြားဘေး ဘက်မှာဝင်အိပ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော့နားနားကပ်ပြီး တိုးတိုးလေး “အကိုကျော် အိပ်နေပြီလား” လို့မေးပါတယ်။ ကျနော်က “ဟင့်အင်း၊ နင်တို့ရုပ်ရှင်က ဘယ်တော့မှပြမှာလည်း” “သူတို့က သမီးတို့အိပ်ပျော်လောက်မှ စ မှာ နောက် နာရီဝက်လောက်တော့လိုဦးမယ်။” “နေပါဦးနင်တို့ဘယ်ကနေချောင်းတာလဲ ” ဆိုတော့ သူကလာ၊လာ ဆိုပြီးသူတို့ချောင်းတဲ့အပေါက်ကိုပြပါတယ်။ အောက်ကမိဘတွေက သူတို့လုံခြုံလှပြီ ထင်နေတာ ဒီအပေါ်မှာအောက်ကိုချောင်းကြည့်စရာ အပေါက်တွေက အများကြီး။ ကြမ်းပေါ်မှာခင်းထားတဲ့ ပလတ်စတစ်ကော်ဇောကို မ လိုက်တာနဲ့ အောက်က ဧည့်ခန်းကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် ကိုမြင်နေရပါတယ်။ အောက်မှာ ကိုအောင်မြင့်က တီဗွီနဲ့အောက်စက်ကို ဂျွိုင်းနေပါတယ်။ အမယု့နဲ့ ကျန်တဲ့ လင်မယားနှစ်စုံ ကတော့ တီဗွီရှေ့ ကြမ်းပြင်မှာ အဆင်သင့်ထိုင်စောင့်နေကြပါပြီ။
ကိုအောင်မြင့်က အမယု့ကို တိုးတိုးလေး တစုံတခုပြောလိုက်တော့ အမယု့က သူ့သမီးတွေအခန်း အောက်ဘက်လာပြီးအသာနားထောင် ပါတယ်။ အပေါ်က ဘာသံမှ မကြားရတော့ ကိုအောင်မြင့်ကို လက်နဲ့ အိုကေ လုပ်ပြပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ ကိုအောင်မြင့်က အခွေကိုအောက်စက်ထဲထည့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အသံကိုတိုးတိုးလေးဖြစ်အောင်လျှော့လိုက်ပါတယ်။ ရီရီအောင်က မီးမီးကိုအချက်ပေးလိုက်တော့ မီးမီးလည်း ကုတင်အောက်ဆင်းလာပြီး ကျနော်တို့သုံးယောက် ကုတင်ဘေးကြမ်းပြင်မှာ ဖင်ဘူးတောင်း ထောင်ကြပါတော့တယ်။ကျနော်က အလယ်မှာ ရီရီအောင်နဲ့ မီးမီးက တဖက်တချက်စီမှာပေါ့။ ရုပ်ရှင်က အမေရိကန်ကားပါ၊ စတာနဲ့ ဘဲ ၃ ပွေနဲ့ ဆော် ၃ ပွေ နမ်းနေရာကစပါတယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ အ၀တ် အစားတွေကို တယောက်တလှည့်ချွတ်ကြပါတယ်။ ဘဲ ၃ ပွေထဲက တယောက်က ကပ်ပလီပါ။ သူ့လီးကလည်း ဒီ ၃ ယောက်ထဲမှာတော်တော်ကြီးပါတယ်။ သူတို့တွေ အ၀တ်အစားချွတ်ပြီတော့ ဘဲနှစ်ပွေက ဆော် ၂ ပွေကို စ ပြီးဂျာပါတယ်။ ကျန်တဲ့ဆော် ၁ ပွေက သူ့ဘဲကို ပုလွေပေးပါတော့တယ်။ ကျနော့စိတ်ကတော့ အောက်က ရုပ်ရှင်ကားထက် အပေါ်က ၂ ပွေကိုကိုင်ဘို့ ပိုစိတ်သန်နေလို့ ရုပ်ရှင်ကို သိပ်မကြည့်ဘဲ ရီရီအောင့်ကိုအသာလေး ဖက်လိုက်ပါတယ်။ သူကလဲ အောက်ကိုကြည့်ပြီး တင်း နေပြီဆိုတော့ ငြိမ်ခံနေပါတယ်။ ကျနော်က တခြား ထွေထွေ ထူးထူးတွေလုပ်မနေတော့ဘဲ ရီရီအောင့်ဖင်ကြီးကိုစပွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ ဖင်အကွဲ ကြောင်းကြား ထဲ ဘောင်းဘီပေါ်ကနေဘဲ အပေါ်အောက်ဆွဲပေးလိုက်တော့ ကုန်းနေတဲ့ ရီရီအောင်ကော့သွား ပါတယ်။ ကော့သွားတော့မှ သူ့အဖုတ်က ဖေါင်းပြီးပြူထွက်လာပါတယ်။ ကျနော်က သူ့ဘောင်းဘီကို ဒူးအထိ အသာ ဆွဲချွတ်လိုက် ပြီးသူ့အဖုတ်ရော ဖင်ကိုပါ လက်ခလယ်နဲ့ ဆွဲဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်။ သူကလည်းဖီလင်တော်တော်လာနေပြီ ဆိုတော့ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းကြားမှာစောက်ရည်တွေနဲ့ ရွှဲနေပါပြီ။ ကျနော်က သူ့နောက်ဘက်ကိုနေရာရွှေ့ လိုက်ပြီး သူ့ဖင်နောက်မှာစောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပြူထွက်နေတဲ့သူ့စောက်ဖုတ်ကို ကုံးယက်လိုက်ပါတယ်။ ရီရီအောင့်မှာ တွန့်ကနဲဖြစ်သွားပြီး သူ့ဖင်ကို ကျနော့ ဘက်ပိုပြီးကော့ထိုးပေးပါတယ်။
ကျနော်လဲ မညှာတမ်းကို အပီယက်ပါတော့တယ်။ သူ့ပေါင်နှစ်ချောင်းကို အားပြုဆွဲဆွဲပြီး အားရပါးရကိုယက်နေလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်ရီရီအောင့်ကိုဂျာနေတာက်ု မီးမီးက အစမှာတော့သိပုံမရပါဘူး။ သူကအောက်ကလိုးပွဲကြီးကိုဘဲ အားပါးတရကုန်းကြည့်နေပါတယ်။ ကျနော်ကအဖုတ်ယက်တာခနရပ်လိုက်ပြီး ရီရီအောင့်စောက်ဖုတ်ထဲကို ပထမ လက်ညှိုးလေးသွင်းပြီး ဖြေးဖြေးလေး ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက် လုပ်နေလိုက်ပါတယ်။ သူ့စောက်ဖုတ်ကလက်ညှိုးတချောင်းသွင်းတာချောင်နေတော့ ကျနော် လက်ညှိုးလက်ခလယ်နှစ်ချောင်း သွင်း လိုက်ပါတယ်။ ဒါတောင်တအားကြပ်မနေဘဲ လွယ်လွယ်ဝင်နေထွက်နေပါတယ်။ ဒီကောင်မလေး ဘယ်သူ့ အလိုး ကြိတ်ပြီးခံနေလဲတော့မသိဘူး စောက်ဖုတ်ကတော့လိုးပြီးသားစောက်ဖုတ်ကြီးဆိုတာ တော်တော် သိသာနေပါတယ်။ အဲဒီတော့လည်းပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ ကျနော်က သူ့နောက်မှာ ဒူးထောက်လိုက်ပြီး ကျနော့ လီးကြီးကို သူ့စောက်ဖုတ်ဝကိုတေ့လိုက်ပါတယ်။ တေ့ပြီးခနလောက် အပေါ်အောက်ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်ပြီး တော့ ကျနော့လီးကို သူ့စောက်ဖုတ်ထဲ ချော့သွင်းလိုက်ပါတယ်။ စောက်ရည်တွေကလည်းရွှဲနေ စောက်ဖုတ်ကြီး ကလည်း ခံဘူးပြီးသားဆိုတော့ ကျနော့လီးက ချောချောချူဘဲဝင်သွားပါတယ်။ ကျနော်က အဆုံးထိသွင်းလိုက် ပြီး ခန ငြိမ်နေလိုက်ပါတယ်။ ပြီးမှ သူ့ကို ဖြေးဖြေးလေးစလိုးပါတယ်။ သူကတော့အောက်က လိုးပွဲကိုအကြည့် မပျက်ဘဲ ကျနော့အလိုးကိုကောင်းကောင်းခံနေပါတော့တယ်။ ကျနော်ရီရီအောင့်ကိုလိုးနေရင်းသတိရလို့ မီးမီးကိုကြည့်လိုက်တော့ မီးမီးက ကျနော်လိုးနေတာကို ကြည့်နေပါတယ်။ လူချင်းကနီးနီးလေးဆိုတော့ ကျနော်လည်း မီးမီးဖင်ကို ကျနော့ဘယ်လက်နဲ့ လှမ်းပွတ်ပေးလိုက်ပြီး ရီရီအောင့်ကိုလုပ်ခဲ့သလိုဘဲ ဘောင်းဘီပေါ်က သူ့စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းတလျှောက်ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်။ မီးမီးက ကျနော် ကောင်းကောင်းလက်လှမ်းမှီအောင် နဲနဲကပ်လာပြီး သူ့ဘောင်းဘီကို သူကိုယ်တိုင်ဘဲ ဆွဲချွတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်လဲ ရီရီအောင်ကို လိုးနေရင်း မီးမီးစောက်ဖုတ်ကိုလည်း ကျနော့ လက်ခလယ်နဲ့ တပြိုင်တည်း လိုးပေးနေလိုက်ပါတယ်။
မီးမီးက အောက်ကရုပ်ရှင်ကားကို ပြန်ကုန်းကြည့်နေပြီး ကျနော့ လက်ခလယ်အလိုး ကိုခံနေပါတယ်။ သူ့စောက်ဖုတ်ကလည်း ရီရီအောင့်လိုဘဲ လက်တချောင်းမဲ့ချောင်နေလို့ ကျနော့်မှာ တချောင်းလိုး နဲ့ မရတော့ဘဲ လက်ညှိုးအကူပါခေါ် ပြီး နှစ်ချောင်းလိုးရပါတော့တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ အောက်က ရုပ်ရှင်ကိုမျက်လုံးနဲ့ကြည့် အရသာခံရင်း စောက်ဖုတ်တွေကိုတော့ ကျနော့လီးနဲ့တယောက် လက်နဲ့တယောက် အလိုးခံနေပါတော့တယ်။ တော်တော်လေးကြာလာတော့ ရီရီအောင်ကအောက်ကနေ ကျနော့ကို ကော့ကော့ထိုးလာပါတယ်။ သူပြီးကာနီးပြီဆိုတာ သိလို့ ကျနော့လက် ကို မီးမီးအဖုတ်ထဲက ဆွဲထုတ်ပြီး ရီရီအောင့် တင်ပါးကိုအားပြုပြီး ကျနော် အသားကုန်စောင့်ပေးလိုက်တော့ ရီရီအောင် ကျနော့ ဖက်ကို အတင်းတိုးဖိဝင်လာပြီး ပြီး သွားပါတယ်။ သူပီးသွားတော့ သူ့စောက်ဖုတ်ကိုဆွဲချွတ် လိုက်ပြီး ကြမ်းပေါ်မှာ မှောက်ရက်အိပ်ချလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်က တဘက်စစ်မျက်နှာကျသွားပြီဆိုတော့ နောက်တဘက်ကို တက်စုံရွက်စုံဖွင့်ရပါတော့တယ်။ ကျနော် မီးမီးနောက်မှာ ဒူးထောက်လိုက်ပြီး ရီရီအောင့် စောက်ရည်တွေနဲ့ ရွှဲရွှဲစိုနေတဲ့ကျနော့လီးကြီးကို မီးမီးစောက်ဖုတ် ထဲ တခါတည်းတဆုံးထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်။ မီးမီးကလည်းဖြုံပုံတောင်မရပါဘူး။ ကျနော့မှာသာ တွင်းသစ်လေး တွေတူးရမလားလို့ပျော်နေခဲ့တာ ဒီတွင်း နှစ်တွင်းစလုံးက တွင်းဟောင်းတွေဖြစ်နေပါတော့တယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် စောက်ဖုတ်ဟာစောက်ဖုတ်ပါဘဲ။ လိုးလို့ကတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ဒီတခါတော့ ကျနော်မီးမီးကို အားကုန်သုံးပြီးအသားကုန်ကျုံးပါ တော့တယ်။ သိပ်တော့မကြာလိုက်ပါဘူး မီးမီးစောက်ဖုတ်ကလည်းပြီးကာနီး ကြောင်း အချက်ပေးလာပါတယ်။ ကျနော်လည်း ထိမ်းမနေတော့ဘဲ ခပ်ပြင်းပြင်းစောင့်လိုးပြီးသူ့စောက်ဖုတ်ထဲကို ကျနော့လရေတွေကို ပန်းထုတ် ရင်းပြီးလိုက်ပါတော့တယ်။ မီမီးက ပြီးသွားတော့ သူ့စောက်ဖုတ်ကို ဆွဲထုတ် သွားပြီး အောက်က ရုပ်ရှင်ကို ဆက်ကြည့်နေပါတယ်။ အာဂကောင်မလေးပါဘဲ။ ကျနော်က တော့ တော်တော်ပြိုင်းသွားတာနဲ့ ကုတင်ပေါ် တက်ပြီးအိပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ထိအိပ်ပျော်သွားတယ်မသိဘူး နားထဲမှာ တဖုတ်ဖုတ် အသံကြား နေပြီးနိုးလာပါတယ်။ ဘာသံပါလိမ့်လို့ စဉ်းစားနေတုံး အသံက ပိုပိုပြင်းလာပါတယ်။ အဲဒီတော့မှသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။ ကိုအောင်မြင့်တို့ လင်မယား ရုပ်ရှင်ပြီးသွားတော့ တင်းတင်း နဲ့ သူတို့အခန်းထဲမှာ လိုးနေကြတာကိုး။ သူတို့လိုးသံကိုကြားတော့မှ ကျနော့လီးက ချက်ချင်းပြန်တောင်လာပါတယ်။ ကျနော့ဘေးမှာ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်စလုံးက အိပ်ပျော်နေပါပြီ။ ကျနော်လည်း ဘယ်သူ့ကိုလိုးရမလဲစဉ်းစားနေရင်းနဲ့ သူတို့အိပ်နေတာ ကိုကြည့်ပြီးနှိုးရမှာအားနာသွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ဘဲ ကိုအောင်မြင့်နဲ့ အမယု့တို့ လိုးသံကို နားထောင်ရင်း အမမြင့်ကို ကိုအောင်မြင့်နေရာမှာ ကိုအောင်မြင့်မဟုတ်ဘဲ ကျနော်ကိုယ်တိုင်က လိုးနေတယ်လို့စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ဂွေကိုင်နေ လိုက်ပါတယ်။ ကိုအောင်မြင့်ကလဲ တော်တော်လိုးနိုင်ပုံပါဘဲ တော်တော်လေးကြာတော့မှ အမမြင့်၇ဲ့ ရင်ခေါင်း ထဲကညှစ်သံကြီးလို “အီး…..အီး…..အီး…. ” နဲ့ထွက်လာပြီးသူတို့အသံတိတ်သွားပါတယ်။ အဲဒီအမမြင့်အော်သံနဲ့အတူ ကျနော်လည်းတချီပြီးသွားပြီး လရည်တွေ ပန်းထွက်သွားပါတယ်။ အဲဒီပန်းထွက်လာတဲ့လရေတွေကို ကျနော် လက်ဖ၀ါးနဲ့ အုပ်ပြီးထိမ်းထားပြီး ဘောင်းဘီတောင်ပြန်မ၀တ်ဘဲ ဖင်ပြောင်လေးတွေနဲ့အိပ်နေတဲ့ ရီရီအောင်နဲ့ မီးမီးတို့ရဲ့စောက်ဖုတ်ပေါ်သုတ် လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ကျနော်လည်းမောမောနဲ့ အိပ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ နောက်နေ့ မနက်အိပ်ယာကထတော့ အမမြင့် ဈေးသွားတော့မှ ကျနော် အသာလေး ခြင်ထောင်ထဲကထွက် လိုက်ပြီး အောက်ထပ်ဆင်းပြီးခြေရင်းခန်းမှာထိုင်နေလိုက်ပါတယ်။ ကိုအောင်မြင့်က အိပ်တုံးပါ။ ခနလောက်နေပြီးမှခြံထဲက ထွက်ပြီး ခုမှ အပြင်က၀င်လာသလိုမျိုးဟန်ဆောင်လိုက်ပါတယ်။ ရီရီအောင်က နောက်ဖေးမှာ မီးမီးကိုတော့မတွေ့ဘူး။ ကျနော် အသံပေးပြီးသူတို့အိမ်ထဲခန၀င်လိုက်ပါတယ်။
နောက်ဖေးထိဝင်သွားပြီး ရီရီအောင့်ကို ဟိုဟိုဒီဒီ စကားတွေလျှောက်ပြောပြီး ခနနေတော့ အပြင်ပြန်ထွက်လာ ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ပြောပုံအရ ဒီညမှာလည်း တပွဲရှိသေးတော့ ကျနော်ကြိုပြီးပြင်ဆင်၇ပါဦးမယ်။ျနော် အိမ်ကို ခုမှ မြို့ ထဲက ပြန်ရောက်လာတဲ့ပုံစံနဲ့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အမေ့ကို ဒီညလည်း မြို့ထဲသွားအိပ်ရဦးမယ့်လို့ စကား ပလင် ခံထားလိုက်ပါတယ်။ အမေက ဘာမှ မပြောပါဘူး။ အရင်ကလည်း ဒီလိုသူငယ်ချင်းတွေအိမ်မှာ အိပ်နေကျ ဆိုတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ အဲဒီညမှာလည်းမနေ့ကလိုဘဲ တီဗွီအစီအစဉ် မပြီးခင် လူကြီးတွေ အချေအနေ ကြည့်ပြီး အိမ်ပေါ်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်အပေါ်ရောက်ပြီး မကြာခင်မှာဘဲ မီးမီးကအခန်းထဲရောက်လာ ပါတယ်။ ပြီးတော့ တံခါးကိုချက်ထိုးလိုက်ပြီး ခြင်ထောင်ထဲဝင်လာပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ဝင်လာလာခြင်းဘဲ ကျနော့ကိုဖက်ပြီးနမ်းပါတော့တယ်။ ကျနော်ကလည်း သူ့နှုပ်ခမ်းကို ကောင်းကောင်းစုပ်နမ်းပေးလိုက်တာပေါ့။ တော်တော်ကြာကြာနမ်းပြီးတော့ မှ မီးမီးက ခွာလိုက်ပြီး “အကိုကျော် မကောင်းဘူး” လို့ပြောပါတယ်။ “ဟေ၊ ဘာလို့တုံးဟ” “မနေ့က အကိုကျော်က မကြီး ရီရီအောင်ကိုကျတော့ အကုန်လုပ်ပေးပြီး မီးကိုကျတော့ အကုန်မလုပ်ပေးဘူး” “အင်၊ နင့်ကိုလည်းငါ ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးတာဘဲ၊ ဘာလည်း ငါလုပ်ပေးတာမကောင်းလို့လား” “အကိုကျော်က မကြီးကိုကျတော့ ပါးစပ်နဲ့လည်းလုပ်ပေးတယ်လေ၊ မီးကိုကျတော့ တခါတည်း သူ့ဟာကြီးနဲ့ပဲလုပ်ပြီးတော့” “အော်၊ ဒါလား၊ အေးပါဟာ၊ ငါနင့်ကို အခုအကြွေးပြန်ဆပ်မယ်၊ ဟုတ်ပြီလား” အဲ့လိုပြောပြီးကျနော်လည်းအချိန်မဆွဲတော့ဘဲ သူ့အင်္ကျီကိုမချွတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ သူ့ ဘော်လီချိတ် တွေကိုဖြုတ်လိုက်ပြီး ဘောင်းဘီကိုပါဆွဲချွတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့မနေ့ကလို သိပ်နှူးစရာမလိုတော့ဘူး လေ။ သူကိုယ်တုံးလုံးလေးဖြစ်သွားတာနဲ့ကျနော်က သူ့ နို့နှစ်လုံးကို တဘက်ပြီးတဘက် စို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နို့မှာ အချိန်သိပ်မဖြုံးတော့ဘဲ သူ့စောက်ဖုတ်ဘက်ကို တိုက်စစ်ဆင်ပါတော့တယ်။ မီးမီးစောက်ဖုတ်ကြီးက ဖေါင်းနေတော့ လက်ဝါးတခုလုံးနဲ့ အုပ်ကိုင်ပြီးနဲနဲလေးညှစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော့လျှာနဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးတခုလုံးကို အပေါ်အောက်ယက်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။
မီးမီးမှာ သူ့စောက်စိကို လျှာက ဖိ ဆွဲလိုက်တိုင်း သူ့ဖင်ကြီးက ကော့ကော့တက်လာပါတယ်။ အသံမထွက်အောင် ပါးစပ်ကိုအတင်းစိထား တော့ လည်းချောင်းထဲက အီး…အီး.. ဆိုတဲ့အသံဘဲထွက်နေပါတယ်။ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကလည်း ကျနော့တံတွေး တွေနဲ့ ရော သူ့စောက်ရည်တွေနဲ့ရော စိုရွှဲနေပါတယ်။ ကျနော်က သူ့စောက်စိကို စုတ်လိုက်ယက်လိုက်လုပ်နေ ရင်း သူ့စောက်ဖုတ်ထဲကို ကျနော့လက်ခလယ်ကို အပေါ်လှန်ပြီးသွင်းလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စာတွေထဲမှာ ဖတ်ဘူးတဲ့အတိုင်း သူ့ဂျီစပေါ့ ဆိုတဲ့နေရာကို လက်ချောင်းထိပ်လေးနဲ့ ဖိဖိပြီးစက်ဝိုင်းပုံမွှေ့ပေးလိုက်ပါတယ်။ သိသာတာကတော့ မီးမီးရဲ့ ပေါင်တွေဟာ ဆတ်ဆတ် ဆတ်ဆတ်နဲ့ တုံနေပါတယ်။ ကျနော့လျှာက စောက်စိကို မရပ်မနားယက်နေစုပ်နေပြီး လက်ကလဲ စောက်ခေါင်းထဲမှာ ပွဲကြမ်းနေတော့ မီးမီးရဲ့ ဖင်က ကုတင်ကနေ ၆ လက်မလောက် ကျွကျွတက်လာပါတယ်။ ခြေဖျားကိုလည်းအတင်းဆန့်ထားပြီး သူ့ စောက်ဖုတ်ကြီးက ကျနော့ မျက်နှာကို အတင်းကိုစောင့်စောင့်ထိုးနေပါတော့တယ်။ ပါးစပ်ကလည်း အီး….အီး……အီး….. နဲ့ အော်နေပြီး ခနကြာတော့ သူ့စောက်ဖုတ်ထဲက စောက်ရည်တွေပန်းပြီး ထွက်လာပါတယ်။ ပန်းပုံက သေးပေါက်သလိုကို ပန်းတာပါ။ ကျနော့မျက်နှာတခုလုံးလည်းစောက်ရေတွေနဲ့ ပလဲသွားပါတယ်။ ပါးစပ်ထဲကိုလည်းဝင်ကုန်ပါတယ်။ ဒ့ါအပြင် ကျနော်က အင်္ကျီတောင်မချွတ်ရသေးတော့ ကျနော့်အင်္ကျီလည်းစိုကုန်ပါတယ်။ ထွက်တဲ့စောက်ရည် က မရှိဘူးဆိုရင် ဖန်ခွက်တ၀က်လောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီလို စောက်ရည်တွေပန်းထွက်ပြီးတော့ မီးမီးလဲ ကျနော့ဆီကနေ အတင်းရုံးထွက်ပြီး သူ့ ဒူးလေးကိုကွေးပြီးဘေးစောင်းလေးအိပ်လို့ ဆပ်ကနဲဆပ်ကနဲတုန်နေပြီး တအားမေါနေသလိုမျိုး အသက်ကိုရှိုက်ရှိုက်ရှူနေပါတယ်။ ကျနော်လည်း မျက်နှာမှာပေနေတဲ့ သူ့စောက်ရည် တွေကို သူ့ဘောင်းဘီနဲ့ဘဲ သုပ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ သတိရလို့နားထောင်ကြည့်လိုက်တော့ အောက်ထပ်မှာ တီဗွီ အစီအစဉ်တွေပြီး ပြီး လူတွေပြန်နေကြပါပြီ။
မီးမီးလဲ မေါမေါနဲ့ အိပ်ပျော်သွားပါတယ်။ ကျနော်လည်း နောက်တပွဲနွှဲဘို့ အားမွေးရင်း မီးမီးဘေးမှာခန လှဲနေ လိုက်ပါတယ်။ ခနနေတော့ ရီရီအောင်လည်း အပေါ်တက်လာသံကြားလို့ ကျနော်က အသာ ထ ပြီး အခန်းတံခါးသော့ဖွင့်ထားလိုက်ပါတယ်။ ရီရီအောင်ကအခန်းထဲကိုဝင်လာ ပြီး ထုံးစံအတိုင်း အ၀တ်အစားလဲပါတယ်။ ဒီတခါလဲပုံက သူ့အ၀တ်တွေ အားလုံးချွတ်ချပြီးမှ ပြန်ဝတ်တာပါ။ ပြီးတော့ ခြင်ထောင်ထဲဝင်လာပါတယ်။ အဲဒီမှာ အိပ်ယာခင်းက စိုရွှဲနေတာတွေ့သွားတော့ “အင် ဘာတွေလည်း ဒီမှာ စိုရွှဲနေတာဘဲ” “မီးမီးလေ ငါယက်ပေးလိုက်တာကောင်းလွန်းလို့ ပန်းထွက်ကုန်တာလေ။” “သေးတွေလား” “အဲဒါသေးမဟုတ်ဘူးဟ၊ ကောင်းလွန်းရင်ထွက်တတ်တဲ့စောက်ရည်တမျိူးဘဲ။ ကြည့်ပါလား၊ သေးစော်နံမှမနံဘဲ” “အင် သမီးကျတော့ ကောင်းတာ အဲဒီလို မဖြစ်ပါဘူး။” “အဲ့လိုမျိုးက လူတိုင်းမဖြစ်ဘူးဟ၊ တချို့ဘဲဖြစ်တတ်တာ။ ကဲပါ လာ၊လာ၊ အောက်မှာ လုပ်ငန်းမစခင် ငါတို့ အစပျိုးထားရအောင်။” “အွန်း အကိုအောင်က မီးမီးနဲ့ အစပျိုးထားပြီးပြိမို့လား။” “အေးလေ၊ သူအရင်ရောက်လာတော့လဲ အချိန်တွေ အလကားမဖြစ်အောင် လုပ်ရတာပေါ့ဟ။ ဒါနဲ့နေပါဦး နင်တို့ ကိုမေးပါဦးမယ်၊ နင်တို့ ငါ့အလိုးမခံခင် ဘယ်သူ့အလိုးခံထားသေးလဲ။” “အံမယ်၊ အကိုအောင့်ကို အရင်ဆုံးခံတာပါနော်။ ဘယ်ယောက်င်္ကျားမ မခံဘူးသေးဘူးသိလား။” “မခံဘူးသေးဘူးသာပြောတယ် နင်တို့နှစ်ယောက်စလုံး စောက်ဖုတ်တွေက ကျယ်နေပြီး ငါ့လီးဒီလောက်ကြီး တာတောင် မဖြုံဘူး။ အဲဒါလေးရှင်းစမ်းပါဦး။” “အာအကိုအောင်ကလဲ သမီးတို့က လူသာမခံဘူးတာ ခရမ်းသီးနဲ့လုပ်ဘူးတယ်လေ။
သမီးတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ ခရမ်းသီးက အကို့ဟာကြီးထက် အများကြီး ကြီးတယ် သိလား။” “အိုး ဟိုး ဟိုး ဒါ့ကြောင့်ကိုး။ ငါလဲစဉ်းစားနေတာ နင်တို့ပုံတွေက လူလိုးခံထားတဲ့ပုံတွေမဟုတ်ပါဘူးလို့။ ဒါနဲ့နေပါဦး၊ နင်တို့ကိုဘယ်သူသင်ပေးလို့ဒီလို လုပ်တတ်သွားတာလဲ။” “မီးမီးကသင်ပေးတာ။ သူကငယ်သာငယ်တယ်၊ သမီးထက်ပိုသိတယ်။” “သူကဘယ်လိုလုပ်သိနေရတာလဲ။ သူကရောလူလိုးခံဘူးလို့လား။ ” “မခံဘူးပါဘူးအကိုအောင်ရ။ သူပြောတော့ သူ့အမေလုပ်နေတာကိုသူမြင်ဘူးလို့ သူလည်းလုပ်ကြည့်ရင်းနဲ့ တတ်တာတဲ့။” “အော်၊ အဲဒီတော့ သူက နင့်ဆရာမကြီးဖြစ်နေတာပေါ့၊ ဟုတ်လား။” “အင်း၊ ကဲပါ အကိုအောင်ကလည်း စကားနဲနဲရပ်ပြီး မနေ့ကလိုလုပ်ပေးဦး။” “ဘယ်လိုမျိုးလဲ။” “ဟိုလေ၊ လျှာနဲ့လုပ်တာကိုပြောတာ။” “အင်း၊ နင်အဲဒါကိုကြိုက်သွားပြီမို့လား” “ကောင်းတာကိုး အကိုအောင်ရ၊ ကြိုက်တာပေါ့။ ” “အင်း၊ အဲဒါကို ဘာဂျာမှုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ ငါတို့လီးကို နင်တို့စုတ်ပေးတာကို ပုလွေမှုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်၊ သိလား။” “အကိုအောင်ကလည်း ဒါလေးများ သိတာကြာလှပြီ။” “ဝေ၊ ဘယ်လို သိတာတုံး၊ မီးမီးပြောတာဘဲလား။” “မဟုတ်ဘူး၊ ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေပြောတာ။ သမီးသူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ၅ ယောက်လောက်က ခံဘူးတယ် အကိုအောင်ရ။ သူတို့ပြောပြတာ။” “အေး ခုဆို နင်လည်း သူတို့လိုခံဘူးသွားပြီလေ။ သူတို့ကိုပြန်ကြွားလိုက်ပေါ့။” ပြောပြောဆိုဆို ကျနော်က ရီရီအောင်ရဲ့ ဘောင်းဘီရော အင်္ကျီကိုပါ အကုန်ချွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မီးမီးကတော့ ဘေးမှာ တခူးခူးနဲ့ အိပ်မောကျနေတယ်ဗျ။ ပြီးတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း အ၀တ်အစားတွေ အားလုံးချွတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရီရီအောင့် နို့လေးကို စ ပြီးစို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ စ စို့တာနဲ့ သူ့မှာကြက်သီး တွေထလာပါတယ်။ ကျနော်က သူ့နို့နှစ်ဘက်စလုံးကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ဖြေးဖြေးလေးနယ်ပေး ပွတ်ပေးရင်း ဘယ်တလှည့် ညာတလှည့် စို့စို့ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရီရီအောင်က ကျနော့ ဆံပင်ကိုစုတ်ကိုင်လိုက် ခေါင်းကို အတင်း ဆွဲလိုက်နဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ နို့စို့လို့ ၀ တော့မှ ကျနော်က သူ့ပေါင်ကြားကိုလှည့်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ဘေးမှာ ဗြောင်းပြန် လှည့်လိုက်ပြီး ကျနော့်ခြေထောက်တွေကို သူ့ခေါင်းဘေးမှာထားပြီး ခြောက်ကိုး ဆံဆံ လေးလှည့်ပြီးတော့ သူ့စောက်ဖုတ်ကို စပြီးယက်ပေးပါတော့တယ်။ စ ယက်လိုက်တာနဲ့ အီး……. ဆိုပြီး ရီရီအောင့် လယ်ချောင်းထဲ က ညည်းသံရှည်ကြီးထွက်လာပါတယ်။ အစမှာ ကျနော်က သူ့စောက်ဖုတ် ဘေးတ၀ိုက်ကို ယက်ပေးနေပြီး ခနနေတော့ စောက်စိကို လျှာဖျားလေးနဲ့ ဖိဖိပြီးခပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူက ကျနော့လက်မောင်းကို လှမ်းဆုပ် ကိုင်ပြီး အတင်းညစ်ထားပါတယ်။ စောက်စိကို ယက်လိုက် စုတ်လိုက်နဲ့တော်တော်ကြာကြာ လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူ့လည်း ဖင်ကမြောက်ကြွမြောက်ကြွဖြစ်လာပါတယ်။ ကျနော်လည်းတဆင့်ထပ်တက်ပြီး သူ့စောက်ခေါင်းထဲကို လျှာထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်။ အီး……..ကနဲအသံထွက်လာပြီး သူ့ဖင်ကြီးလဲ လေထဲမြောက်ကြွလာပါတယ်။ သူ့စောက်ခေါင်းထဲမှာ စောက်ရည် ချွဲချွဲ တွေနဲ့ ရွှဲနေပါတယ်။ ကျနော်လည်း စောက်ခေါင်းထဲ လျှာထိုးထည့်လိုက် စောက်စိကို စုတ်လိုက် နဲ့လုပ်ရင်းက ကိုယ်တိုင်လဲ တအားကိုဖီးတက်လာပြီး ကျနော့လီးကြီးကလည်း တအားတောင်နေ ပါတော့တယ်။ ပီးတော့ ကျနော်ကကျနော့လျှာကို စောက်စိကိုဘဲ ဦးစားပေးယက်ခိုင်းလိုက်ပြီး စောက်ခေါင်းထဲ ကို ကျနော့လက်ညှိုနဲ့ လက်ခလယ် နှစ်ချောင်းပူးသွင်းပြီး စောက်ခေါင်းထဲမှာ ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကို မွှေ့ပေးနေ လိုက်ပါတယ်။ သူ့စောက်ဖုတ်ကလည်း ကျနော့လက်ချောင်းတွေကို တအားညှစ်ထားတာ ကြပ်နေပါတယ်။ အစမှာတော့ ရီရီအောင်က သူဘဲကောင်းကောင်းအစုတ်ခံနေရာက တော်တော်ကြာလာတော့ ကျနော့လီး ကြီးကို သတိပြုမိသွားပုံရပါတယ်။ သူက ကျနော့လီးကြီးကို လှမ်းစုပ်ကိုင်ပြီး ညှစ်ပေးနေပါတယ်။ ပြီးတော့ ဂွင်းထုသလိုမျိုး လုပ်ပေးပါတယ်။
အဲဒီတော့မှ ကျနော့လီးကလဲ သံဒုတ်လို တအားမာတောင်လာပါတော့ တယ်။ သူက ကျနော့ပေါင်တချောင်းကိုအတင်းဆွဲမပြီးတော့ သူ့ခေါင်းကိုခွစေလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လီးကို အရင်းကဆုပ်ကိုင်ပြီး ပိုထွက်နေတဲ့ကျန်တဲ့အပိုင်းကို သူ့ပါးစပ်ထဲထည့်ပြီး စုပ်ပါတော့တယ်။ သူစုပ်ပုံက မက်မက်စက်စက် နဲ့ လီးထဲက ထွက်သမျှအရည်ကို တအားစုပ်ယူနေတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ ကောင်းလိုက်တာဗျာ ကျနော်က ပြီး မသွားပေမဲ့ ကျနော်လီးက အရည်တွေအများကြီးထွက်ပြီးသူ့ပါးစပ်ထဲဝင်နေတာကိုခံစားရပါတယ်။ ရီရီအောင်ကတော့ ဒီလီးကြီးကိုဘဲ အငန်းမရကို တပြွတ်ပြွတ် စုတ်နေပြီး ထွက်လာသမျ လရည်တွေကို မြိုချနေပါတယ်။ ကျနော်က သူ့စောက်ဖုတ်ကို ကြမ်းကြမ်းစုတ်လေ သူကလည်းကျနော့လီးကို ကြမ်းကြမ်း စုတ်လေနဲ့ အပေးအယူ မျှ နေပါတယ်။ အဲဒီလို စုပ်ရင်း ယက်ရင်းနဲ့ သူလည်းပြီးချင်လာတယ်ထင်ပါတယ် သူ့စောက်ဖုတ်က ကျနော့ပါးစပ်ကို တအားကော့ကော့ထိုးလာပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကျနော်ကလည်း သူ့ပါးစပ်ကို စောက်ဖုတ်လိုးသလို လိုးနေပါပြီ။ ကျနော်လည်း တအားပြီးချင်နေပါပြီ။ သူမပြီးသေးခင်ပြီး မသွားအောင်တော်တော်ထိန်းနေရတာပါ။ ခနလေးဘဲကြာလိုက်ပါတယ် ရီရီအောင် က သူ့ ဖင်ကြီးကို တအားမြောက်ပြီးကျနော့မျက်နှာကို သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးနဲ့ ပစ်ပစ်ဆောင့်ပြီး ပြီးသွားပါတယ်။ သူပြီးတာနဲ့ တပြိုင်တည်း ကျနော်လည်း ထိန်းထားတာ လွှတ်ချလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ ကျနော့လီးထဲက လရည်တွေ ပန်းပန်းထွက်ပြီးအားလုံးသူ့ အာခေါင်ထဲကိုဝင်သွားပါတယ်။ သူကလည်း ထွက်လာသမျှလရည်တွေ ကို အကုန်စုတ်စုတ်ပြီးမြိုချလိုက်ပါတော့တယ်။ အား… ကောင်းလိုက်တာ၊ ဒီလိုကောင်းပုံမျိုးအရင်က တခါမှ မကြုံဘူးဘူးဗျာ။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် ခန နားပြီးတဲ့အချိန်မှာဘဲ အောက်က ဗီဒီယို ပွဲကစပါတော့တယ်။ ရီရီအောင်က မီးမီး ကို အသာလှုပ်နှိုးလိုက်ပြီး ကြမ်းပေါ်မှာ သုံးယောက်သားဖင်ဘူးတောင်း ထောင်ကြပါတော့တယ်။ ဒီနေ့ပြတဲ့ကားက အာရှကားဗျ၊ ဂျပန်လိုလို ထိုင်းလိုလိူပါဘဲ။ အသေအချာတော့မသိဘူး။ စော်တွေကတော့ စောက်မွှေးတွေ တော်တော်ထူတယ်။ မနေ့ကကားဆိုရင် အားလုံးက ရိပ်ထားကြတာ ပြောင်နေတာဘဲ။ ကျနော်က စောက်မွှေးနဲ့ စော်ဆိုရင် သိပ်ဖီးမလာလို့ ကြည့်၇တာ သိပ်အရသာမတွေ့ဘူးဗျ။ ဒါပေမဲ့လဲ အစတော့ ကြည့်ရတာပေါ့။
အဲဒီမှာကြည့်ရင်းနဲ့တွေ့လာရတာက အပြင်ကရုပ်ရှင်ကားပါဘဲ။ အောက်က သုံးစုံတွဲက ပထမတော့ ရိုးရိုးဘဲ ကြည့်နေကြတာ၊ ခန ကြာလာတော့ မီးမီးအမေတို့စုံတွဲ (ကိုခင်မောင် နဲ့ မတူး) က စဖေါက်လာပါတယ်။ သူတို့က ကြမ်းပေါ်မှာထိုင်နေပုံက ယောက်ကျားရင်ခွင်ထဲမှာ မိန်းမက၀င်ထိုင်နေတာ။သူ့ယောက်ကျားက ပေါင်ကားထား ပြီး မိန်းမက ပေါင်ကြားထဲဝင်ထိုင်ပြီးမှီထားတာ။ အဲသလိုနေရင်းနဲ့ မီးမီးအဖေက သူ့မိန်းမ နို့ကို နောက်ကပိုက်ပြီး စ နယ်ပါတော့တယ်။ မီးပိတ်ထားပေမဲ့ တီဗွီက အလင်းရောင်နဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းကြီးကို မြင်နေရပါတယ်။ ပထမတော့ အင်္ကျီပေါ်ကနယ်နေရာကနေ နောက်ပိုင်း အင်္ကျီကိုမပြီး ပေါ်တင်ကြီးကိုနယ်ပါတယ်။ မီးမီးအမေကလဲ မယုံနိုင်လောက်အောင်ကို အရှက်ကင်းမဲ့စွာဘဲ အရသာခံနေပါတယ်။ ကိုခင်မောင်တို့စုံတွဲကိုကျန်တဲ့ ကိုမြအေးနဲ့မလှခင်တို့ စုံတွဲရယ် ကိုအောင်မြင့်နဲ့ အမယု့တို့စုံတွဲရယ်က မြင်ပြီး သူတို့လဲ ဓါတ်ကူးကုန်ကြပုံရပါတယ်၊ ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာတော့ အောက်က မိန်းမ သုံးယောက်စလုံးမှာ အပေါ် အင်္ကျီတွေ မရှိကြတော့ဘဲ သူတို့နို့တွေကို သူတို့ယောက်ကျားတွေက နယ်တဲ့သူကနယ်၊ ကုန်းစို့တဲ့သူကစို့ နဲ့ ဖြစ်နေကြပါပြီ။ ကျနော်တို့လည်း ရုပ်ရှင်ထက် ပိုကြည့်ကောင်းနေတဲ့ မြင်ကွင်းကိုဘဲ မျက်လုံးမလွှဲဘဲကြည့်နေ မိပါတယ်။ ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကလည်း သူတို့ အမေအဖေတွေ လုပ်နေတာကိုကြည့်ပြီး ပိုပြီးထန်လာပုံ ရပါတယ်၊ နှစ်ယောက်စလုံး အသက်ရှူသံတွေပြင်းလာပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း အောက်ကဇာတ်လမ်းက ပိုကြည့်ကောင်းနေတော့ သူတို့ကို တခုခုလုပ်ဘို့ကိုတောင် မေ့နေပါတယ်။ အဲဒီမှာ ရှေ့တဆင့်ထပ်တက်တာ ကလည်း ကိုခင်မောင်တို့လင်မယားပါဘဲ။ ကိုခင်မောင်က သူရော သူ့မိန်းမကိုပါ ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ချလိုက်ပြီး သူ့မိန်းမကို လှဲအိပ်ခိုင်းလိုက်ပြီး စ ဂျာပါတော့တယ်။ သူ့မန်းမကလဲ တီဗွီကို အကြည့်မပျက်ဘဲ ကောင်းကောင်း အရသာခံနေပါတယ်။ သူတို့လဲ အဲဒီလိုလုပ်ရော ကျန်တဲ့ နှစ်စုံတွဲကလည်း သူတို့ခင်းတဲ့လမ်းဆက်လျှောက်ပါ တော့တယ်။ တီဗွီရှေ့မှာ လင်မယား သုံးစုံတွဲ ကိုယ်တုံးလုံးကြီးနဲ့ ကိုခင်မောင်နဲ့ ကိုအောင်မြင့်တို့က သူတို့မိန်းမ တွေကို ဂျာနေတဲ့အချိန် ကိုလှမြင့်ကိုတော့ သူ့မိန်းမက ပုလွေမှုတ်ပေးနေပါတယ်။ ဒီတခါမှာတော့ရှေ့တဆင့်တက်သူက ကိုအောင်မြင့်ပါ။ ကိုအောင်မြင့်က အမယု့ကို လေးဘက်ကုန်းခိုင်းပြီး နောက်ကနေ ဒူးထောက်ပြီးကျုံးပါတော့တယ်။ ကိုအောင်မြင့်လဲ စကျုံးရော ကိုခင်မောင်ရော ကိုလှမြင့်ပါ လုပ်လက်စအလုပ်တွေရပ်ပြီး သူတို့မိန်းမတွေကို စလိုးကြပါတော့တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးက သူတို့မိန်းမ တွေကို ပက်လက်ထားပြီး အပေါ်ကနေဖါးထိုင်ထိုင်ပြီး လိုးကြပါတော့တယ်။
သူတို့တွေလိုးနေတာကိုကြည့်ရင်း သတိရလို့ကြည့်လိုက်တော့ ရီရီအောင်ရော မီးမီးပါ သူတို့စောက်ဖုတ်တွေထဲ လက်ထိုးထဲ့ပြီး အသားကုန် ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေကြပါတယ်။ ကျနော်လည်း သူတို့ကိုလိုးရတာထက် အောက်ကပွဲက ပိုကြည့်ကောင်းနေ တာကတကြောင်း သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်း သူတို့ဖာသာ အဆင်ပြေနေတာကတကြောင်းဆိုတော့ ကျနော်လည်း အောက်ကိုကြည့်ပြီး ဂွေကိုင်ပါတော့တယ်။ အောက်ကပွဲကတော့တော်တော်ကြမ်းနေပါပြီ။ ကိုအောင်မြင့်ကမောလာလို့လားမသိဘူး ပုံစံပြောင်ပြီး ဒီတခါ ကိုအောင်မြင့်က အောက်မှာ ပက်လက်အိပ်လိုက် ပြီး အမယု့က အပေါ်ကနေ တက်ဆောင့်ပါတော့တယ်။ အမယု့ ဆောင့်ပုံက တော်တော်အားပါတော့ ကျနော့မှာ ကိုအောင်မြင့်ခါးကျိုးမှာတောင်ကြောက်နေရပါတယ်။ ဟိုနှစ်တွဲကလည်း ပုံစံပြောင်းပြီး မိန်းမနှစ်ယောက်စလုံးက အမယု့ လုပ်သလို အပေါ်ကနေ တက်ဆောင့်ကြပါတော့တယ်။ သူတို့သုံးစုံတွဲ ဆောင့်နေတဲ့အသံက ကြားရတာ တော်တော်ကိုကျယ်ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ မွှန်နေတော့ လောကကြီးကို လုံးဝသတိမရတော့ပါဘူး။ အဲသလိုလိုးနေကြရင်းနဲ့ ကိုခင်မောင်တို့လင်မယားက အရင်ဆုံးပြီးသွားပါတယ်။ သူတို့နောက်မှာ ကိုလှမြင့်တို့ လင်မယားလည်း မရှေးမနှေင်းမှာဘဲပြီးသွားပါတယ်။ ကိုအောင်မြင့်တို့ကတော့လိုးကောင်းတုံးပါ။ အမမြင့်က အပေါ်ကစောင့်နေရာကနေ တခါပုံစံပြောင်းပြီး ပက်လက်အိပ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ ကိုအောင်မြင့်က ဒီတခါ အပေါ်ကပြန်ဆောင့်ပြန်တာပေါ့။ ကိုအောင်မြင့်ဆောင့်ပုံများကတော့ကြမ်းလွန်းလို့ အမမြင့်မှာ အင့်ကနဲအင့်ကနဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ တော်တော်ကြာကြာဆောင့်လိုးပြီးတော့မှ ကိုအောင်မြင့်လည်း ပြီးသွားပါတော့တယ်။ ဒီပွဲမှာ အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ကိုအောင်မြင့်ကြီး အနိုင်ရသွားပါတော့တယ်။ နောက်နေ့တွေမှာ မတူးနဲ့မလှခင် တို့ကတော့ ကိုအောင်မြင့် အလိုးကိုခံချင်နေမှာ အသေအချာပါဘဲ။ အဲဒီညက မီးမီးကို တချီ ရီရီအောင်ကို တချီ လိုးပေးလိုက်ပြီး မနက်လင်းတော့ ထုံးစံအတိုင်းဘဲ လစ်ထွက်ခဲ့ပါ တယ်။ ဗီဒီယိုက စနေ တနင်္ဂနွေဘဲပြတာဆိုတော့ ရုံးဖွင့်ရက် ၅ ရက်လုံးကတော့ ဒီလို အခွင့်အရေးရဘို့မလွယ် တော့ပါဘူး။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း မနေ့ညက အောက်မှာဖြစ်နေတာတွေကိုမြင်ပြီးကတည်းက စိတ်ထဲမှာ အမယု့ကို တအားလိုးချင်စိတ်ပေါက်နေပါတယ်။ ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကို မဖြစ်ဘဲ အမယု့ကိုမှဘဲ ထူးထူး ခြားခြားကြီးကိုလိုးချင်နေတာပါ။ နောက်နေ့တွေ အမယု့ကိုမြင်တာနဲ့ ကျနော့လီးက တောင်တောင်လာပါ တယ်။
သူ့ကိုလိုးရဘို့ဥာဏ်နီ ဥာဏ်နက်တွေ ထုတ်တာလဲ ဘယ်လိုမှ မရ ပါဘူး။ ဘယ်ကစပြီး ဘယ်လိုလုံးရ မလဲမသိဘူး။ ကျနော့မှာစားလဲဒီစိတ် အိပ်လဲ ဒီစိတ်ဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ ရီရီအောင်နဲ့ မီးမီးကတော့ ဘယ်အချိန် လိုးလိုး လူလစ်လို့ကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လစ်ချိန်က နဲတော့ တပါတ်လုံးမှာ ရီရီအောင့်ကို တခါ မီးမီးကို နှစ်ခါဘဲ လိုးလိုက်ရပါတယ်။ ဒါတောင် အမြန်ဆွဲရတာပါ။ အပေါ်ထပ်မှာ စာသင်နေတုံး တယောက်ကို အောက်မှာကင်းစောင့်ခိုင်းပြီး နောက်တယောက်ကို လိုးရတာပါ။ မီးမီးကိုက နောက်ဖေးက အိမ်သာနောက်မှာ ဒီအတိုင်းကုန်းခိုင်းပြီး တချီလိုးခဲ့၇တာပါ။ သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကျနော့လက်ခုပ်ထဲကရေပါဘဲ။ အခွင့်အရေးရလို့ကတော့ ကြိုက်တဲ့အချိန် တက်လိုးဘဲ။ ဒီလိုနဲ့ မျှော်လင့်နေတဲ့ နောက်တပါတ် စနေ ကိုရောက်လာပြန်ပါတယ်။ ကျနော်က အဲဒီနေ့ကို ပိုမျှော်မိတာက အပေါ်ကကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကိုလိုးဘို့ထက် အောက်က အမမြင့် တို့လိုးတာကိုမြင်ရဘို့ရယ်၊ အမမြင့် အပေါ်က တက်ဆောင့်နေတဲ့အခါ သူ့နို့ကြီးတွေ ဗရမ်းဗတာ လှုပ်ရမ်းနေတာကို မြင်ပြီး ဂွင်းထုခြင်စိတ်က ပိုပါတယ်။ တပါတ်လုံးလဲ အမမြင့်ကို စိတ်ကူးနဲ့လိုးနေတာ အမမြင့်ကတော့ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်ကြေနေပါပြီ။ အဲဒီနေ့က ကိုအောင်မြင့်အိမ်မှာ မရှိဘူး။ ကိစ္စတခုနဲ့ မော်လမြိုင်ခနသွားနေတယ်။ အဲဒီတော့ အောက်မှာ အမမြင့်က ဘက်ပဲ့နေတာပေါ့။ ကျနော်တို့သုံးယောက်ကလည်း ထုံးစံအတိုင်း အပေါ်မှာ အဆင်သင့်ပါဘဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပါတ်ကလိုဘဲ အောက်က ရှိုးပွဲမစခင် အပေါ်မှာ ကျနော်က ကောင်မလေးနှစ်ယောက်စလုံးကို ဂျာပေးထားပြီးလို့ သူတို့က ကျေနပ်နေကြပြီလေ။ အောက်မှာကတော့ အရင်အပါတ်က အရှိန်ရှိထားတော့ အချိန်သိပ်ကြာကြာတောင်မစောင့်လိုက်ရပါဘူး ဟိုနှစ်စုံတွဲက လုပ်ငန်းစနေပါပြီး။ ဒီတခါတော့ စောစောစီးစီးဘဲ ၀တ်လစ်စားလစ်ဖြစ်ကုန်ပြီး စ လိုးနေကြပါပြီ။ သူတို့က အမယု့ကို လုံးဝဂရုတောင်မစိုက်ပါဘူး။ အမယု့ကလဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ပဲ တီဗွီကိုကြည့်လိုက် အပြင်က နှစ်တွဲကို ကြည့်လိုက်နဲ့ တပြိုင်တည်း ရုပ်ရှင်ကား သုံးကား ကြည့်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း အပေါ်ကနေ သူတို့ကို ရှိုးပြီး ဖီးတက်နေတာပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာဘဲ မထင်မှတ်တာဖြစ်လာပါတယ်။ ကျနော်တို့ကြည့်နေရင်း ကိုခင်မောင်ကမတူးကိုလိုးနေတာကိုရပ်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ မတူးအနားကခွာသွားပြီး အမယု့ဆီကို တိုးသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ အမယု့ပေါင်ကြားထဲခေါင်းသွင်း လိုက်ပြီးတခါတည်းဂျာတော့တာပါဘဲ။ ထမီတောင်မချွတ်ဘဲ ထမီကိုမပြီး ထမီထဲခေါင်းသွင်းပြီးဂျာတာပါ။ အမယု့က ပထမတော့ ကိုခင်မောင့်ခေါင်းကို နဲနဲတွန်းထားပေမဲ့ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း တအားထန်နေတယ် ထင်ပါရဲ့ သူ့ထမီကို ခါးထိဆွဲမထားလိုက်ပါတယ်။ ကိုခင်မောင်က အမယု့ပေါင် နှစ်လုံးကို အပေါ်ဆွဲမပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကို ပယ်ပယ်နယ်ကြီးကို ဂျာပါတော့တယ်။ မတူးကအဲဒါကိုထိုင်ကြည့်နေပြီး သူ့စောက်ဖုတ်ကို သူပွတ်နေပါတယ်။ ကိုမြအေးတို့ကလည်း အမယု့ကို ကိုခင်မောင် ဂျာနေတာကို လှန်းကြည့်ပြီး သူတို့ရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေက ပိုပြင်းလာပါတယ်။ မနေ့ကတည်းက အမယု့ရဲ့ ထန်ပုံတွေကို သူတို့တွေ့ထားတော့ ကိုမြအေးလည်း အမယု့ကို လိုးချင်နေပုံ၇ပါတယ်။ ကိုခင်မောင်က အမယု့ကို ဂျာနေတာ ရပ်လိုက်ပြီး ပေါင်တဘက်ကို ဆွဲထောင်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့သူကဘေးစောင်းကြီးအမယု့ကိုလိုးပါတော့တယ်။ လိုးတာမှ မရပ်မနား တဆက်ထဲကို အချက်နှစ်ရာလောက်ကျော်မယ်ထင်ပါတယ်။ အဲ့လို တဖုန်းဖုန်းနဲ့ အသားကုန်လိုးပြီးတော့ အမယု့ စောက်ဖုတ်ထဲမှာဘဲ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ပြီးလိုက်ပါတယ်။ ကိုခင်မောင်လဲသူ့လီးကြီးကို အမယု့စောက်ဖုတ်ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်ရော ကိုမြအေးဟာ သူ့မိန်းမ မလှခင်ကို လိုးနေရာက သူ့လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး အမယု့နား ကိုချက်ချင်းကပ်လာပြီး သူ့လီးကြီးကို အမယု့စောက်ဖုတ်ထဲကို ထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ နွားသိုး ကြိုးပြတ် အသားကုန်လိုးပါတော့တယ်။ ဘယ်အချိန်ကတည်းက လိုးချင်နေလဲတော့မသိဘူး ကိုမြအေးဟာ လုံးဝမနားဘဲ အားရပါးရ ကိုဆောင့်ဆောင့်လိုးနေပါတယ်။ သူ့မိန်းမကတော့ သူတို့ကိုထိုင်ကြည့်နေပါတယ်။ သိပ်တော့မကြာလိုက်ပါဘူး ကိုမြအေးလဲ အမယု့စောက်ဖုတ်ထဲမှာဘဲ သူ့လရည်တွေ ပန်းထည့်ပြီး ပြီးသွား ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ အမယု့စောက်ဖုတ်ထဲက သူ့လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်ပြီး သူ့မိန်းမနားသူပြန်သွားပြီးတော့ ခွေခွေလေးလှဲပြီး အမောဖြေနေပါတော့တယ်။ ကျနော်တို့မှာတော့ ကိုယ့်မျက်စေ့ရှေ့မှာမြင်နေရတာကို မယုံနိုင်အောင်ဘဲဖြစ်နေရပါတော့တယ်။ ကျနော့လီးကလည်း ခါတိုင်းနဲ့မတူအောင်ကို မာတောင်နေပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ရီရီအောင်ရော မီးမီးရောကို တယောက် တလှည့်စီ ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ရက်သား လိုးပါတော့တယ်။ ကျနော့လီး မာနေပုံက သံချောင်း လိုတင်းနေပြီး နာတောင်နာနေပါတယ်။
ဒါနဲ့ဘဲ ကျနော်လဲ သူတို့ကို အသားကုန်ကျူံးပြီး မီးမီး စောက်ဖုတ်ထဲမှာ ပြီးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ သုံးယောက်စလုံး တယောက်ကိုတယောက်ဖက်ပြီး ကြမ်းပေါ်မှာဘဲ အိပ်ပျော် သွားပါတယ်။ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသွားတယ်မသိပါဘူး ကျနော်တရေးနိုးလာတော့ ရီရီအောင်နဲ့ မီးမီးက ဘေးမှာ တုံးလုံး ပက်လက်အိပ်ပျော်နေကြပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ညကအကြောင်းကို ပြန်တွေးမိပြီး လီးကချက်ချင်းကို တောင်လာပါတယ်။ ပထမတော့ ဘေးကတယောက်ကိုဘဲ လိုးလိုက်မလို့စဉ်းစားလိုက်ပြီး နောက်မှ အမယု့ က စိတ်ထဲဝင်လာပါတယ်။ ကိုအောင်မြင့်ကလည်းမရှိ အမယု့က တယောက်ထဲဖြစ်နေမှာကို တွေးမိတော့ ကျနော် အမယု့ကို သွားလိုးဖို့စိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့အောက်ကိုချောင်းလိုက်တော့ အောက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိတော့ပါဘူး။ အမယု့များသူတို့ လင်မယားတွေနဲ့ အတူတူ သွားအိပ်နေမလားလို့တွေးမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သေချာအောင်ကျနော်အခန်းထဲက ကိုယ်တုံလုံးဘဲ ထွက်လိုက်ပြီး အမယု့တို့အိပ်ခန်းထဲကို ကြည့်လိုက် တော့ အမယု့ကမရှိပါဘူး။ သေချာသွားပြီပေါ့၊ သွားပါပြီတခါ၊ အောက်ဆင်းပြီး ကျနော့ကိုလဲပေးလိုးအုံးလို့ ဘယ်လိုလုပ်ပြောရမလဲဗျာ။ အဲဒါနဲ့ ရှိတာဘဲပြန်လိုးတော့မယ်ဆိုပြီး အခန်းထဲပြန်ဝင်မယ်အလုပ်မှာ အသက်ရှူ သံ ပြင်းပြင်းကြားလို့ကြည့်လိုက်တော့ အမယု့ဟာ အပေါ်ထပ်အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ ဖျာခင်းပြီးပက်လက်ကြီး ခြေပစ် လက်ပစ် အိပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်ထီပေါက်ပြီပေါ့။ ကျနော်က အမယု့နားကပ်သွားပြီး အမယု့ ထမီပေါ်ကနေ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို အသာလေး ကိုင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ဟာဗျာ၊ နဲနဲနောနောကြီးမှမဟုတ်ဘဲ။ အပေါ်ကချောင်းကြည့်ရတုံးက စောက်ဖုတ်ကို သေသေချာချာမှမမြင်ရဘဲ၊ ခု ကိုင်ကြည့်လိုက်တော့မှ ကျနော့မှာ ရင်တုန်ပန်းတုံဖြစ်လာပါတယ်။ ထမီကိုအတင်းဆွဲလှန်ပြီး တခါထဲ ဆောင့် လိုး လိုက်ချင်စိတ်ကို မနဲထိန်းထားရပါတယ်။
ကျနော်က အမယု့ရဲ့ ထမီကို ဖြေးဖြေးချင်း ခါးထိအသာ လှန် လိုက်ပါတယ်။ အမယု့က လီးနှစ်ချောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းအလိုးခံပြီး ခြေကုန်လက်ပန်းကျပြီး နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် အိပ်ပျော်နေတော့ မနိုးပါဘူး။ ကျနော်က အမယု့ရဲ့ပေါင်ကြားမှာမှောက်အိပ်လိုက်ပြီး သူ့စောက်ဖုတ်ကို စ ယက်လိုက်ပါတယ်။ သူ့စောက်ဖုတ်က စောက်မွှေးလုံးဝမရှိဘဲပြောင်ချောနေပါတယ်။ ယက်ရင်းယက်ရင်းနဲ့ ကျနော်လည်း တအားဖီးတက်လာပြီး စောက်ဖုတ်ထဲ လျှာထိုးထိုးထည့်လိုက် စောက်စိကိုစုတ်လိုက်နဲ့ ပွဲတော် တယ်နေလိုက်ပါတယ်။ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကလည်း သူ့စောက်ရည်တွေလား ဟိုလူနှစ်ယောက်ရဲ့လရည်တွေ လား တော့မသိပါဘူး အရည်တော်တော် ရွှဲနေပါတယ်။ ကျနော်ယက်နေ၇င်းဘဲ အမယု့ လှုပ်လာပါတယ်။ ပြီးသူလဲ ဖီလင်တက်လာပုံရပါတယ်၊ ပါးစပ်က တအင်းအင်း နဲ့ အသံထွက်လာပါတယ်။ သူ့စောက်ဖုတ်ကရော သူ့တင်ပါးကရော လှုပ်ရွလှုပ်ရွ ဖြစ်လာပါတယ်။ တော်တော်ကြာကြာယက်ပေး စုပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှ ကျနော် က ထထိုင်လိုက်ပြီး အမယု့ပေါင်ကိုဆွဲဖြဲလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ ခြေကျင်းဝတ်ကနေ ပေါင်ကို မ ကိုင်လိုက်ပြီး တော့ ကျနော်က ဖားထိုင်ထိုင်ပြီး ကျနော့လီးကြီးကို အမယု့စောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်။ စောက်ဖုတ်ကြီးက စိုရွှဲနေတော့ ကျနော့လီးလဲ တဆုံးထိဝင်သွားပါတော့တယ်။ အစမှာတော့ ဖြေးဖြေးမှန်မှန် လေး အဆုံးထိဆောင့်ဆောင့်လိုးပေးနေလိုက် အ၇ှိန်မြှင့်ပြီးဆောင့်လိုးလိုက် အရှိန်ပြန်လျှော့လိုက်နဲ့ စိတ်တိုင်းကျကိုလိုးပေးနေလိုက်ပါတယ်။ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကလဲ ကလေး လေးယောက်သာမွေးထားတာ လိုးရတာစီးစီးပိုင်ပိုင်နဲ့ ကျနော့လီးတချောင်းလုံးကို နေရာလပ်မကျန် အရသာရှိနေပါတယ်။ စောက်ဖုတ် အများကြီး မလိုးဘူးသေးပေမဲ့ လိုးဘူးသမျှစောက်ဖုတ်ထဲမှာအရသာအတွေ့ဆုံးစောက်ဖုတ်ကြီးပါဘဲ။
သူ့ သမီးနဲ့ မီးမီးတို့ကတောင် အပျိုစောက်ဖုတ်ဖြစ်ပေမဲ့ ဒီကလေးအမေစောက်ဖုတ်ကိုတော့လုံးဝမမီပါဘူး။ ကောင်းလိုက်တာဗျာ၊ အောက်က လူနှစ်ယောက်လဲ နောက်ဆို သူတို့မိန်းမတွေကိုလိုးမှ လိုးပါဦးမလားမသိဘူး။ အမယု့လိုစောက်ဖုတ်မျိုးက တခါလိုးဘူးယုံနဲ့ တသက်ဆွဲသွားမဲ့စောက်ဖုတ်မျိုးပါ။ ကျနော်လည်း တတ်နိုင် သလောက် အချိန်ဆွဲပြီး ကြာနိုင်သမျှကြာအောင်ဆွဲလိုးနေလိုက်ပါတယ်။ ပြိုင်ဘက်တွေကများတော့ ကိုယ်က သူများထက် သာအောင်လိုးနိုင်မှဖြစ်မှာပါ။ တယောက်ချင်းဆိုရင် အောက်က နှစ်ယောက်က ကြောက်စရာမရှိ ပေမဲ့ ကိုအောင်မြင့်ထက်တော့ သာမှ ဖြစ်မှာပါ။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်အမယု့ကို တော်တော်ကြာအောင်ကို ထိန်းလိုးနေပြီး တော်တော်လေးကြာတော့မှ ကျနော်လည်း တော်တော်မောလာတော့ လိုးအားကိုမြှင့်လိုက်ပြီး အသားကုန် ဆောင့်ဆောင့်လိုးပြီး ကျနော့လရည်တွေကို သူ့စောက်ဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်ပြီးပြီးလိုက်ပါတော့တယ်။ လောကကြီးမှာ ဒီထက်ကောင်းတဲ့စောက်ဖုတ်ဆိုတာရှိနိုင်မယ်မထင်တော့ပါဘူး.ပြီးး
(၁၉)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲမှ သိန်း တစ်ထောင်ဆု ပေါင်မြို့မှကံထူးရှင်